Abantu abaningi bazi inkulumo ethi "Izingane ezincane -. inkinga encane" Omdala ingane, ekudinga kakhulu ke kuphakama. Kepha akusikho lokho kuphela ezintweni ezibonakalayo, kodwa futhi abezindaba. Wonke umzali kufanele bakulungele leso sikhathi kuzakufika izinsuku, lapho ufuna ukutshela izingane zakho ukuthi ukuba nezingane, baphi omama kanye obaba izingane.
Uma izingane ezindala unesithakazelo imininingwane, izingane ukuphendula imibuzo ezahlukene kungaba ngempela emfushane. Asidingi incazelo Izingane ezisencane kakhulu njengoba kukhona izingane, imininingwane kanye ezicashile zonke bokuphila. Toddler ngesikhathi esithile kuyoba impendulo ngokwanele "umama isisu." Ngokuvamile, ngaleso sikhathi isithakazelo ingane sekuqalile ukuba okunye nezinye izinkinga musa kuphakama.
Kabanzi ukuchaza izingane indlela unezingane, abe abazali ambalwa wezingane esezikhulile, abanye abasha njengoba 5 ubudala. Kusukela ngaleso sikhathi pochemuchek, ingane nesithakazelo konke, futhi umbuzo wokuqala, okuyinto umzali wemfanelo kufanele kube umusho omkhulu emabintana hlandla. Kulesi sigaba kubalulekile ukucacisa chubby umfanyana, njengoba ingane ingena esiswini umama. Kubalulekile hhayi ukulimaza umntwana imishwana uthembeke kakhulu noma izithombe nakakhulu, ngoba eseluphele ezifanayo ingane psyche Kumiswa sisasebenza. Udinga Thenga kakhulu izincwadi thematic, okuyinto kwanele ezitolo zezincwadi, futhi kancane kancane ukuchaza imininingwane ingane. Inketho iphila kunazo simiswe ngalendlela lelandzelako: uma umama nobaba - abadala - bethandana, bavame hug kiss, futhi kuphela uthando olukhulu upapa we neqiniso lokuthi uwukwenziwa nonina ukwabelana nge imbewu ekhethekile, owesifazane eseqala ukuzwa ukuthi Sisu othile ixazululwe.
Ukutshela izingane indlela unezingane, kufanele uzilungiselele lokuthi ingane Kungenzeka ube nentshisekelo ulwazi mayelana ukuthi benzeni esiswini sikamama wami ingane, ngoba emnyama futhi ungakujabulisi. Kukhona umsizi kungaba isithombe zibukeke abonisa ukuthi umuntu wokuqala akubukeki njenge konke ujwayele ukubona. Kid ubuthe amandla lapho, okuningi ukudla futhi ukhule. Kwakungenxa kuphela lapho eqaphela ukuthi kakade isibe efanayo zonke ezinye izingane, kodwa ke uqala ukubuza phandle.
Izingane nazo ngokuvamile nesithakazelo ilwazi njengoba kukhona izingane. Izithombe kulesi simo kungaba kokubili abasizi inkathazo eyiqaphuqaphu, ngoba kubalulekile ukwazi ukuthi ukukhetha imifanekiso. Zonke kangcono uma zonke tot kuzakhulunywa ngakho kube izithombe, Ungathi inganekwane. Kuthiwa ukuphuma ingane ukuzalelwa umama kusiza udokotela. Uma siqhubeka ulandele imibuzo uyahamba kanjani ncamashi by, kangakanani ukuthi umama has a imbobo ekhethekile phansi lapho umntwana kuyakhethwa. Uma ingane ifuna ukubheka le ndawo, kubalulekile ukucacisa ukuthi kukhona izindawo Secrets, okuyinto akusho.
Zonke izingane zithande izingane, ngakho eziningi ezithakazelisayo zibonakala lutho, futhi kungakhathaliseki ukuthi izingane unezingane. Kumele kuchazwe futhi lesi simo. Omama baye kwadingeka ukukutshela kungani unayo izingane - omkhulu uthando umama nobaba. Kodwa abazali - abadala. Ngakho izingane ingavela kuphela abadala abaneminyaka engu-18.
Imijovo yokugoma ezinyangeni ezingu-3: inzuzo noma umonakalo?
Umlingisikazi Anastasia Begunova: izithombe kanye biography
Ukusetshenziswa Belladonna. Utshani, amajikijolo, nezimbali Belladonna e yesintu imithi
Ibhuloho eNkulu Kaliningrad: umgwaqo kusukela esikhathini esidlule kuze kube sesikhathini esizayo
"Chevrolet Cruze" (sedan): Ukubuyekeza imifanekiso 2014-2015.